Xinhua Myanmar - အမေရိကန်တွင် COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးသူ ၅ သိန်းကျော်ထိ ရှိလာကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်း တက္ကသိုလ်ထုတ်ပြန်
အမေရိကန်နိုင်ငံ လူဝီစီးယားနားပြည်နယ် နယူးအော်လင်းတွင် COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးသွားသူများအတွက် အောက်မေ့ဖွယ် အမှတ်တရ အလံတံခွန်များ စိုက်ထူးထားသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က တွေ့ ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
နယူးယောက်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြင့်သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်သည့် သန်းဝက်( ၅သိန်း) ထိ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် သိပ္ပံ နှင့် အင်ဂျင်နီယာဌာန (CSSE) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ၂၄ မိနစ် ( ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၂၁၂၄ နာရီ) အထိ ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာ ၂၈.၁ သန်းရှိပြီး သေဆုံးသူ ၅၀၀,၀၇၁ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း CSSE ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ လင်ကွန်းအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူများ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားကြသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် နယူးယောက်ပြည်နယ်ကို ကျော်၍ သေဆုံးသူ ၄၉,၄၃၉ ဦးရှိကာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သေဆုံးမှု အမြင့်ဆုံး ပြည်နယ်အဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်က သေဆုံးသူ ၄၆,၉၁၇ ဦးဖြင့် သေဆုံးမှု ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ပြည်နယ် ဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ယင်းနောက်တွင် တက္ကဆက်စ်ပြည်နယ်က ၄၂,၂၉၁ ဦး နှင့် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က ၃၀,၀၆၅ ဦးဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီး ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း CSSE ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် သေဆုံးသူ ၁၅,၀၀၀ အထက်ရှိသော ပြည်နယ်များမှာ ပင်ဆူဗေးနီးယား ၊ နယူးဂျာစီ ၊ အီလီနွိုက်၊ အိုဟိုင်းအိုး၊ ဂျော်ဂျီယာ ၊ မစ်ချီဂန် ၊ မက်ဆာချူးဆက် နှင့် အရီဇိုးနား ပြည်နယ်တို့ ပါဝင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှု နှင့် သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြစ်ကာ ရောဂါရိုက်ခတ်မှုဒဏ် အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရသည့် နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး ကူးစက်မှု၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော် နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး သေဆုံးမှု၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အထိရှိနေကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၇ ရက်က COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၁ သိန်း ရှိခဲ့ရာမှ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ၂ သိန်း နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ၃ သိန်းအထိ အသီးသီး မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အထိ သေဆုံးသူ ၄ သိန်း အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် ၁ သိန်း မှ ၂ သိန်း သို့ ခုန်တက်ရန် အချိန် ၄ လမျှသာ ကြာမြင့်ကြောင်း ၊ ၂ သိန်းမှ ၃ သိန်းသို့ ခုန်တက်ရန် အချိန် ၃ လခန့်သာ ကြာမြင့်ကြောင်း နှင့် ၃ သိန်းမှ ၄ သိန်း ၊ ၄ သိန်းမှ ၅ သိန်းသို့ ခုန်တက်ရန် တစ်လကျော်သာ အသီးသီး ကြာမြင့်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ရောဂါ ကူးစက်မှု အနေအထားပေါ် အခြေခံပြီး ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ် Institute for Health Metrics and Evaluation ဌာ၏ နောက်ဆုံး ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၅၈၉,၁၉၇ ဦးထိ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။(Xinhua)
(1) A memorial service for people who lost lives to COVID-19 is held in New Orleans, Louisiana, the United States, Jan. 19, 2021. (Photo by Lan Wei/Xinhua)
(2) People wearing face masks visit the Lincoln Memorial in Washington, D.C., the United States, Jan. 24, 2021. (Photo by Aaron Schwartz/Xinhua
Previous Article မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှု စတင်
Next Article တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပထမအသုတ် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ